Atirishada Kareena Kapoor oo kashiftay JILAA ay laba jeer GUUR ka diiddey! | Hadalsame Media
Nin mayd ah oo 6 saacadood dhex fadhiyey tareen magaalo (Taraam)
Gabadhii ugu horreeysey oo Somalia ku metelaysa ciyaarta “feerka & laadka”…
Home Madadaalada Atirishada Kareena Kapoor oo kashiftay JILAA ay laba jeer GUUR ka diiddey!
Atirishada Kareena Kapoor oo kashiftay JILAA ay laba jeer GUUR ka diiddey!
(Mumbai) 27 Nof 2019 – Atirishada caanka ah ee Hindiya, Kareena Kapoor ayaa markii ugu horreysay qiratay inaysan si 100% ah uga falcelinin guurkii ugu horreeyay ee uu usoo bandhigay Saif Ali Khan, markii labaad ee uu guurka ka dalbadayna aysan wali hubin inay ku kalsoonaan karto, sida ay maanta qoreen warbaahinta Hindiya, oo uu ka mid yahay wargeyska Hindustan Times.
Kareena oo wareysi siisay warbaahinta Pinkvilla ayaa su’aal laga weydiiyay waxa ka jira wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya inay ku gacan seyrtay guurka Saif.
Waxay sheegtay in Saif uu markii ugu horreysay suurtagalnimada guurkooda kala hadlay xilligii ay isla jilayeen filimka lagu magacaabo Tashan.
Markaas ayey sheegtay inay filimka ku duubayeen waddanka Giriigga, ka dibna iyagoo howsha wada uu Saif usoo bandhigay mowduucaas.
Iyadoo sharraxeysa ayey tiri: “Wuxuu igu yiri ‘waxay ila tahay inaan isguursanno’. hadalkaasna wuxuu ii sheegay annagoo isla joogna Giriigga, mar kalena hadalkaas wuxuu igu soo celiyay annagoo jileyna filimka lagu magacaabo Ladakh. Anigana waxaan markaas ku dhahay: ‘ma ogi, sababtoo ah kuma garanayo’. marka runtii taas micnaheeda ma ahayn ‘maya’, balse waxay ahayd inaan doonayay inaan si wanaagsan isku sii baranno”.
Kareena Kapoor ayaa su’aal laga weydiiyay sida ay shaqadeeda usii wadatay iyadoo la guursaday, carruurna yeelatay.
“Waxaan u maleynayaa inaan sameeyay go’aankii ugu wanaagsanaa nolosheyda oo dhan. Si wanaagsan ayaan u kala caddeeyay arrimaha ku saabsan nolosheyda xirfadeed iyo midda shakhsi ahaaneed ee la xiriirta qoyska. Cudur ma aha in uu qofku jacayl galo, dhimashona ma aha. Waan u sheegay Saif, waxaana ku iri: ‘I dhageyso, aniga waligey ma joojinayo shaqadeyda’, isaguna wuxuu i yiri: ‘taas waajib ayey kugu tahay’.
Saif Aali Khan ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay lagu weydiiyay inuu khatar ka dareemayo guulaha ay Kareena ka gaartay shaqada jilista, gaar ahaan maadaama uusan filimkiisa heer fiican ka gaarin box office-ka.
Isagoo su’aashaas ka jawaabaya ayuu yiri: “Maya, maya, maya. Waxay ila tahay inaan aad uga fognahay arrin noocaas ah. Cid lagu eedi karo ma jirto taas, waad ogtahay xaaladuhu way isbaddalaan, mar kor ayaad jirtaa marna hoos. Mararka qaar qof ayaa ka guulo badan kan kale, mar kalena labada qofba waxay wadaagayaan wakhti aad u wanaagsan. Laakiin aniga waligey sidaas uma fakarin. Run ahaantii guulaha aan ka gaaray nolosheyda waxba kama galin box office, waa mid khuseysa qoyskeyga”.
Kareena Kapoor iyo Saif Ali Khan oo labaduba ah jilayaal caan ka ah dalka Hindiya, dunidana si weyn looga yaqaanno, ayaa isguursaday 16-kii bishii October ee sanadkii 2012-kii.
Previous articleSomalia oo dib u bilowday dhoofinta muuska ee suuqyada caalamka (Laba dal oo maanta loo dhoofiyey)
Next articleGOOGOOSKA: Liverpool vs Napoli 1-1, Slavia Praha vs Inter Milan 1-3
(Zurich) 24 Juun 2021 - Nin Mayd oo 6 saac ku safrayay Taraam. Sheekadan ayaa maalintii Isniinta waxa ay ka dhacday Magaalada Zürich ee wadanka...